Ukufumana amandla kwisigulana esidijithali | Ngxamiseko Live
Chwetheza umbuzo wakho wokukhangela uze ungene kwi:
© 2020 - Ukholo oluphuculweyo. Onke Amalungelo Agciniwe.View Non-AMP Version
iindidi: LezeMpilo noKhuseleko
Ukukhulula amandla kwisigulana esidijithali
Ngabasebenzisi abaqikelelwa kwi-2.77 yezigidigidi kwihlabathi liphela, imeko yemithombo yeendaba zentlalo ilithathile ilizwe ngoqhwithela. EMzantsi Afrika, phantse isiqingatha sabantu sisebenzisa i-intanethi, kubandakanya i-8 yezigidi zabasebenzisi be-Twitter kunye ne-16 yezigidi zabasebenzisi be-Facebook.
le ukuguqulwa kwedijithali uye wavula amathuba amakhulu ekudaleni uluntu oluxhomekeke kwi-intanethi ngokubambisana ngokubanzi malunga nezihloko ezinzima ezifana nezi lawulo lweemeko zempilo.
Faka 'e-Patient', igama elichaza abantu abaqhubayo kwimpilo yabo kunye ukhathalelo lwempilo zigqibo.
Ngoku ka Vanessa Carter, iStriven University of Medicine X e-Patient Scholar kunye nesithethi kwixesha elizayo INgqungquthela yezeMpilo yeNdiza ye-Afrika, i-e-Patients abantu abasebenzisa izixhobo zedijithali ezifana newebhu, ii-smartphones okanye ezinye iingubo zokuzikhusela ukuze bazifundise ngemeko yabo kwaye bahambe indlela yezempilo ukulandelela nokulawula impilo yabo.
"Kwixesha labaxhasi, abaninzi abantu be-e-gulane, ekulawuleni impilo yabo, babonisa iimpawu ezifana nezo zabantu abaphanda uphando ngaphambi kokuba bathenge i-intanethi, nangona i-e-Patient igxile ngaphezu kwaloo nto," kusho uCarter.
Uphononongo oluqhutywe yi-Ofisi yeZibalo zeSizwe e-UK kwi-2018 yabona ukuba i-59% yabasetyhini kunye ne-50% yamadoda khangela iinkcukacha ezihlobene nempilo kwi-intanethi. E-US, i-56% yabantu basebenzisa iiwebhsayithi kunye ne-46% besetyenzisiweyo zeefowuni ukulawula impilo yabo kwi-2018, ngokutsho kwe-Accenture Consulting ye-2018 Survey Consumer kwi-Health Digital.
Nangona kungekho zibalo ezipheleleyo ezifumanekayo kuMzantsi Afrika, uCarter uthi ukuziphendukela kwemithombo ye-intanethi kunye nokubandakanyeka kuye kwindlela ende yokuxhobisa izigulane. Izixhobo zeDijithali kwi21st-Century ziya ngaphaya kwewebhu kwaye ziya kubandakanya iingubo kunye nezicelo zeselula ezithatha idatha yezempilo. "
Ukubandakanywa koorhulumente kubalulekile ekuqhubeni ukusetyenziswa kweteknoloji yedijithali ukuphucula impilo yabemi bayo. Inkqubo ye-E-health njengeirekhodi zezobugcisa zonyango, i-telemedicine kunye neenkqubo zesekhnoloji eziphathekayo zisebenzise ngempumelelo ukuphucula iziphumo zempilo nokuxhobisa abantu.
UMzantsi Afrika, nangona kunjalo, sele kunzima ukufuduka kwiinkqubo zenkcubeko zemveli zesithili kwiinkqubo zokugcinwa kwekhompyutheni ezingasifumaneka nayiphi na indawo yeziko lempilo okanye ugqirha. Oku kuye kwabangela ukuba kubekwe ngokuthe ngqo kwihlabathi e-Health u qo kelelo.
Amanyathelo kaRhulumente ekujoliseni ukugcinwa kwenkathalo lwempilo aye yabonakala kwizicelo ezinjenge-MomConnect, isistim esisekelwe kwisefowuni esinika iinkcukacha kwi-intanethi kubafazi abakhulelweyo. Ukususela ekudalweni kwayo, kuye kwafumana abangaphezu kwezigidigidi ze-1.7 kwii-95% zeziko lempilo yoluntu ukuba ibe lilodwa lamanyathelo amakhulu kunawo wonke emhlabeni. U-NurseConnect ukongezwa kweM MomConnect kubahlengikazi ukufumana ulwazi lweveki kwiinkalo ezinjengezempilo zomama, ukucwangcisa intsapho kunye nempilo emitsha.
UCarter uthi ngelixa ezi zinto zinezinto ezintle, oorhulumente banokwenza okungakumbi ukubetha izikhefu zedijithali kunye nokubonelela ngemithombo esemgangathweni. "Oku kuquka iinkonzo ze-Wi-Fi kwizibhedlele nakwiiklinikhi kunye newebhusayithi yezibhedlele kunye neeklinikhi, zombini ezo zixhobo ezisisiseko ezikwazi ukuxhobisa izigulane nokugcina ixesha kunye nemali ekuphandleni kwi-intanethi."
Ungezelela ukuba umsebenzi olula kwiwebhusayithi yesibhedlele ekwazisa isigulane malunga neyeza elishiyekileyo, umzekelo, unokubaluleka uhambo olubi kakhulu esibhedlele, imigca emide kunye nokunciphisa umthwalo onzima kwiindawo ezininzi.
UCarter akaqinisekanga ukuba iteknoloji yedijithali iya kuba yintloko ekuqinisekiseni ukugcinwa kweenkonzo zonyango lwexesha elizayo, nokuba i-e-Patient iya kuba negalelo eliphambili lokudlala.
"Kuya kuba ngumngeni ukuphuhlisa inkqubo e-E-Health enenjongo ukuba izigulane zingabalingani abalinganayo. Nangona i-e-Izigulane zisasaqhubeka, ikakhulukazi kumazwe asakhulayo njengamabethu, akufanele ahlaziywe njengokuba, ngokuzayo, aya kuba yinto ebalulekileyo yokuqokelela idatha esemgangathweni ngokubambisana nabaqeqeshi babo bezonyango. Oogqirha abanako ukwenza utshintsho lwempilo yedijithali yodwa, "uyongezelela.
Ukuphonononga indima ye-e-Patient kwinkqubo yezempilo ye-digital, inkqubo entsha yeNkomfa yezeMpilo kwi-Afrika yezeMpilo iya kubandakanya iseshoni 'Ukukhula kweDivital: Ukufeza ubuchule bokunakekelwa kokunyamezeleka kwesigulane'. Inkomfa iya kwenzeka kwi-29 Meyi 2019 kwiziko leGallagher, eGoli.
Ukungena kwemiboniso kwiAfrika yezeMpilo ikhululekile.
Iindleko zenkomfa ziyahluka phakathi kweR150 - R300 yokubhalisa kwi-intanethi
Inkcitho yenkomfa iya kunikwa kwintando yendawo.
utyelelo www.africahealthexhibition.com ufuna ulwazi olungolunye.
UVanessa Carter ungummeli wokuchasana nomhlaza kunye nomcebisi we-South African Antibiotic Programme (SAASP). Ukwabonelela ngee-worksshops zeqela kunye noqeqesho lweCPD oluqinisekisiweyo malunga nokusetyenziswa kweenkonzo zezempilo zoluntu kunye nee-E-Patients. Funda kabanzi malunga nomsebenzi kaVanessa apha: www.vanessacarter.co.za
Okunye malunga neMpilo Afrika:
I-Afrika yezeMpilo, ehlelwe yi-Informa Exhibition's Global Healthcare Group, lelona qonga likhulu kwilizwekazi leenkampani zamazwe aphesheya nezasekhaya ukuba zihlangane, zinxibelelane kwaye zenze ishishini kunye nokwanda ngokukhawuleza kwemakethi yezempilo yaseAfrika. Kunyaka wesithoba, umsitho we-2019 kulindeleke ukuba utsale ngaphezulu kweengcali zononophelo lwempilo ezingama-10,500, ezimelwe kumazwe angaphezu kwe-160 nangaphezulu kwama-600 akhokela ukhathalelo lwempilo lwamazwe aphesheya nolwengingqi kunye nabathengisi bamayeza, abavelisi kunye nabanikezeli beenkonzo.
I-Afrika yezeMpilo iye yazisa i-MEDLAB Series yelizwe elidumile-iipotifoliyo zemiboniso zonyango kunye neenkomfa kwi-Middle East, e-Asia, eYurophu naseMerika-ebhodini njengenye yezinto eziphambili zeemboniso.
I-Afrika yezeMpilo ixhaswa ngamaQumrhu e-CSSD eMzantsi Afrika (i-CFSA), uMbutho wabaSebenzi bePer-operative eMzantsi Afrika (i-APPSA - iGauteng Chapter), i-International Federation yezoLwazi kunye neBiological Engineering (IFMBE), i-Emergency Medicine Society yaseMzantsi Afrika (EMSSA), i-Independent Practitioners Association Foundation, iSouth African Health Technology Assessment Society (iSAHTAS), uMbutho wezoMveliso wamaZiko ezeMpilo eMzantsi Afrika (MDMSA), i-Faculty of Health Sciences kwiYunivesithi yaseWitwatersrand, uMbutho wezeMpilo woLuntu eMzantsi Afrika ( I-PHASA), iBhunga leMpilo yeeNkonzo zeMpilo yaseMzantsi Afrika (i-COHSASA), uMbutho wezoThutho eMzantsi Afrika (i-TSSA), uMbutho wezonyango zoLwazi lwezonyango eMzantsi Afrika (SMLTSA) kunye ne-Biomedical Engineering Society yaseMzantsi Afrika (i-BESSA).
Okulandelayo Ukuthelekisa izihlangu ezisebenzayo kwiingcali zeenqwelo zezigulana kunye nabasebenzi be-EMS
egqithileyo «Imfundo yengcali eMzantsi Afrika - Yintoni etshintsha kwinkonzo zikaxakeka nakwaphambi kokubhedlele?
tags: appassociationingxelo yengxeloiingcebiso zokuqhubaiziganekoimpilouqeqeshongxakini
I-2 iminyaka edlulileyo
Oogqirha babantwana base-Italiya baphendula amathandabuzo ali-10 aqhelekileyo phakathi kwabazali malunga nogonyo lweCovid
Ikhomishini ye-EU yabela i-120 yezigidi kwiiprojekthi ezili-11 zophando ezichasene neCovid
I-Ema iqala inkqubo yovavanyo lwesitofu sikaSanofi Pasteur Vidprevtyn
IFransi: IMusée du Patrimoine du Sapeur-Pompier yaseBeaune
UJean-Claude Picot, umyili we "Musée du Patrimoine du Sapeur-Pompier", wazalwa ngo-1938 e…
iiyure 9 eyadlulayo
Ukuphazamiseka kwembonakalo ye-Autism: ukusuka e-Italia Emergenza i-FAD ene-30 ECM kwindlela ye-autism yomsebenzi wezempilo
Ikhosi ka-Italia Emergenza "Autism Spectrum Disorder; ukusukela ekufumanekeni ukuya kungenelelo loncedo" yikhosi efanelekileyo…
I-Italiya / uGuido Parisi yintloko entsha ye-Fire Brigade
I-Itali, uGuido Parisi yiNtloko entsha ye-National Fire Brigade. Uya kuphumelela,…
Oogqirha babantwana baseNtaliyane bathetha ngogonyo lweCovid. Kutheni ugonya abantwana ngokuchasene neCovid-19? Kwaye ke: ngu…
I-Italiya / Intlungu e-Capri, u-Emanuele Melillo waye livolontiya le-Red Cross: amazwi ovelwano kaMongameli Rocca
Intlungu eCapri, u-Emanuele Melillo wayelivolontiya leRed Cross, umqhubi owasweleka…
Ingxakeko ye-Covid: U-Ema unika phambili phambili ukusetyenziswa kwesitofu sokugonya seModerna kubantu abancinci abaneminyaka eli-12 nangaphezulu
I-Ema inika phambili isitofu sokugonya seCovid Moderna kubantu abatsha abaneminyaka eli-12 nangaphezulu, inkampani…